တင်ပါးကြီးသော အမျိုးသမီးများတွင်ဤ “အကျိုးခံစားခွင့်” (၄) မျိုး ရှိသည်….. – Nyi Ma Lay
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ ရှေးလူကြီးများ ပြောစကားအရ တင်ကြီးသော မိန်းကလေးများသည် သား ‌ယောင်္ကျား ကလေးများကို မွေးဖွားနိုင်သည်ဟု ဆိုရိုး စကားရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် မိဘများ ချွေးမရွေး သောအခါ တင်ပါး အရွယ်အစားကို အမြဲတမ်းကြည့်တက်ကြသည်။ တကယ်တော့ မိန်းမ တစ်‌‌ယောက်၏ တင်ပါး အရွယ်အစားဟာ အဓိပ္ပယ် ရှိသည်။
အပြင်ပန်းအရ တင်ကြီးသော အမျိုးသမီးများသည် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ကောက်ကြောင်း လှပမှုကို ပို၍ပေါ်လွင်စေသည်။ တင်ကြီးပြီးခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကောက် ကြောင်းလှပမှုကို ပိုင် ဆိုင် ထားသူတို့သည် လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဒါအပြင် တင်ကြီးသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အကျိုးကျေးဇူးကား အဘယ်နည်း။ အတူတူကြည့်ကြရအောင်
တင်ကြီးသော အမျိုးသမီးများတွင်ဤ “အကျိုးခံစားခွင့်” ၄ခု
အသက် (၃၀) နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု များရှိခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံးရလဒ်များအရ (၃၆) စင်တီမီတာ ထက်ပိုသော တင်ပါးဆုံရိုး ရှိသော အမျိုးသမီးများသည် (၃၆) စင်တီမီတာအောက်ရှိသော အမျိုးသမီးများထက် လိင်ဆန္ဒပြင်းထန် ကြောင်းပြသသည်။
တင်ပါးကြီးထွားမှုဟာ အမျိုးအသီး တစ်‌‌ယောက်၏ အလှအပကို ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကိုလဲ ပိုမို ဆွဲဆောင်းမှု ပိုရှိစေသည်။
၂. “မြင့်မားသော အိုင်ကျူ”
အစောပိုင်းက ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းရှိ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၏ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ တင်ပါးကြီးသော အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပါးတွင် ‘Fatty acid ‘များ ပိုမိုပါဝင်မှုရှိကြောင်း လေ့လာမှုက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို သည် ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေး နိုင်သဖြင့် တင်ပါးကြီးသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ဉာဏ်ရည် သည် ပိုမို မြှင့်မားသည်။
တင်ပိုင်းနှင့် ပေါင်ပိုင်းမှာရှိသော အဆီများသည် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများကို ကာကွယ်ရာ ရောက်သည့်။ အထူးသဖြင့် ပိုလျှံနေသော အဆီများကို ခန္ဒာကိုယ် အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါများသို့ ရောက်ချင်ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ခန္ဒာကိုယ် အောက်ပိုင်း အဝလွန်နေလျှင်လဲ အချိုးအစား မညီမျှကို ဖြစ် ပေါ်စေသည်။
သာမန် အမျိုးသမီးတစ်‌ယောက်၏ ကိုယ် ခန္ဒာထဲတွင် ဆီးချိုရောဂါ တိုက်ဖျက်နိုင်သော ‌ဟော် မုန်းတစ်မျိုးရှိသည်။ သိုသော် ဟော်မုန်းပမာဏသည် တင်ပါးကြီးသော အမျိုးသမီးများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုချက်အရ တင်ပါးကြီးကြီးရှိသော အမျိုးသမီးများသည် ဆီးချို ရောဂါကို ပိုမို ကာကွယ်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ
ယနေ့ ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ် အများစုသည် အခြေခံအားဖြင့် ဦးနှောက် ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ဖြစ်သည်၊ များသောအားဖြင့်ရုံး၌ တစ်နေ့လုံးထိုင်နေကြသဖြင့် ၎င်း၏ တင်ပါးကြွက်သားများ ပျော့ လာသည်။ ထို့အပြင် ရေရှည်သွေးကြောများ ကိုဖိထားခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှု နှေးကွေးစေသည်။ အထူးသဖြင့်ရုံးခန်း ထိုင်ခုံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်သင့်သည်။
၂. Calorie များသော အစားစာများကို လျော့စားခြင်း
အစားအစာကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကယ်လိုရီအလွန်အကျွံစားခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအဆီကိုတိုးပွားစေပြီး အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်၊ဤအချက်က အမျိုးသမီးအများစုမလိုချင်သော အရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်မျှတသောအစားအစာကို စားပြီးကယ်လိုရီ နည်းသော ပါဝင် ပစ္စည်းများကိုစားရမည်။
လေ့ကျင့်ခန်းသည် ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းရန် ချွေးထွက် ခြင်းဖြစ်ရုံသာမက ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းသည်လည်း သင်၏ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်နိုင် ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုကောင်း မွန်စေသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင်၎င်းသည် ခုခံနိုင်မှုနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးမီးယပ် ရောဂါဆိုင်ရာ ရောဂါများကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တားဆီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ပိုမို ယုံကြည်မှုရှိလာနိုင်သည်။
အချို့ အမျိုးသမီးများသည် သူတို့၏ တင်းပါးကြောင့် အလွန်စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကြရသည်။ တကယ်တော့ တင်ပါးကြီးခြင်းသည် ကောင်းကျိုးများစွာရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ၎င်းသည် အာသာချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်၏ တင်ပါးသည် ကြီးမား လွန်းခြင်းကြောင့် စိတ်မပူပါနှင့် ယခုမှစပြီး ကိုယ့်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်ချင်အားဖြင့် ကောက်ကြောင်းလှပပြီး အချိုးအစား ညီသော ခန္ဒာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင် ရာတွင် အိမ့်မက်မဟုတ်တော့ပါ။
ကဲ…ဖတ်ရှုအား ပေးသောချစ် ပရိသတ်ကြီးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။
Previous post ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း တွေက စွန့်မယ့် ဆွမ်းဟင်း များ အားယူဖို့ စောင့်ဆိုင်း နေကြသူတွေ များပြားလာခဲ့….
Next post စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို သီချင်းနဲ့ ချော့ပြီး ပန်းစည်းလေး ပေးလိုက်တဲ့ သားဂန်းကြောင့် ဝမ်းသာကြည်နူးနေတဲ့ ‘ဘေဘီမောင်’